Ka anyi zoo ndi ozo site na ACME Na-eto Eto | Site na Linux
Na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọgụ ezubere iche weebụsaịtị, ọ dịghị mkpa icheta nke ahụ otu n’ime ihe dị mkpa Iji gbochie ụdị mwakpo ahụ ka bụ ịnabata usoro nchekwa dịka izo ya ezo website.
Ọ bụ na ọnọdụ a ka arụ ọrụ ọha na eze na 2015 site na ikike asambodo Ka anyị Encrypt, nke na-enye ngwaọrụ na ntụziaka a na ndokwa nke akpaaka maka ntinye na mmeghari nke asambodo n'efu. maka protocol TLS.
Iji kwado ntinye na ntinye nke HTTPS na weebụ, Ikike ejirila atụmatụ dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, site na nsụgharị 2 nke usoro ACME (Automated Certificate Management Environment), ọ na-enye "asambodo asambodo" n'efu site na Machị 2018.
Ezubere ha ichedo ọnụọgụ subdomains ọ bụla nke 'ngalaba dị mkpa. N'aka ozo, site na asambodo ndia, ndi ochichi nwere ike iji otu asambodo na uzo uzo di nma maka ngalaba ya na subdomains ya nile, ma gharakwa idebanye aha akwukwo maka adreesị weebụ ọ bụla dị ka ọ dị ruo ugbu a. 'n'oge ahụ.
Ka anyị Encrypt kesaa nnukwu akwụkwọ nke asambodo n'efu kwa ụbọchị na 2016, oge ụfọdụ gafee akara akara 100.000 kwa ụbọchị. Ná ngwụsị nke June 2017, ikike ahụ gosipụtara na ọ gaferela asambodo 100 nde kemgbe mmalite ya na Disemba 2015. Ka anyị cheta na na February 2017, Ka anyị Encrypt jiri 13,70% nke ngalaba French niile edebanyere aha.
Na Febụwarị 2020, Ka anyị Encrypt na-ebupụta asambodo XNUMX ijeri na weebụ. Ọ bụ Josh Aas na Sarah Gran kwupụtara ọkwa ahụ na blọgụ ụlọ ọrụ ahụ:
“Anyị nyere anyị akwụkwọ nke otu ijeri na February 27, 2020. Anyị ga-eji ọnụ ọgụgụ a buru ibu dị ka ohere tụgharịa uche n’ihe gbanwere maka anyị na Internetntanetị, nke dugara na mmemme a. Karịsịa, anyị chọrọ ikwu maka ihe mere kemgbe anyị mechara kwuo maka ọtụtụ asambodo: otu narị nde.
“Otu ihe dị iche ugbu a bụ na web zoro ezo karịa ka ọ dị na mbụ. Na June 2017, ihe dịka 58% nke ibu peeji na-eji HTTPS n'ụwa niile, 64% na United States. Taa, 81% nke ibu peeji na-eji HTTPS n'ụwa nile, anyị bụ 91% na United States! Ọ bụ ihe dị egwu. Ọ bụ karịa nzuzo na nchekwa maka onye ọ bụla.
Site na ACME, ZeroSSL abanyela na obere ndị ọchịchị asambodo Ha na-enye asambodo ụbọchị 90 n'efu site na ACME. Dị ka e kwuru na saịtị ahụ, ị ​​nwere nhọrọ iji kpuchido ebe nrụọrụ weebụ gị site na iji asambodo SSL maka ụbọchị 90 na enweghị ụgwọ site na ịdenye aha ZeroSSL n'efu. Validating na akwụkwọ na-ewe nkeji ole na ole na nwụnye dị mfe dị ka ọ bụ na ntuziaka ọ bụla nzọụkwụ nke ụzọ.
Ndị ọrụ nwekwara ike iwulite ntụkwasị obi, chebe azụmahịa ndị ahịa ma nọrọ n'ihu iyi egwu weebụ site na iji otu afọ ZeroSSL Premium SSL asambodo maka otu ma ọ bụ karịa ngalaba, nke na-akwado asambodo anụ ọhịa ma were ihe na-erughị nkeji 10 iji wụnye.
Ebula nke SSL protocol na-enye ohere iji hụ na mgbanwe data dị n'etiti weebụsaịtị na ndị ọrụ Internetntanetị. Nchebe abụrụla ihe dị mkpa n'anya ndị ọrụ.
Usoro ACME (nke na-anọchi anya akpaka Asambodo Management Environment, n'ụzọ nkịtị "Akpaaka Asambodo Management Environment") bụ usoro nkwukọrịta iji gbanwere mgbanwe n'etiti ndị ikikere asambodo na ndị nwe sava weebụ.
Inweta ndị ikikere asambodo ọzọ iji kwado ACME n'ụzọ dị otu a abụghị maka ịrịọ ka ịkwụsị iji Ka Encrypt, kama ọ nwere inwe ụdị dịgasị iche iche na gburugburu ebe obibi na ime ka ọ bụrụ ntụkwasị obi karị.
Ka anyị Encrypt nwere ike ịbụ na ọdachi ndapụta (si mfe ndudue na mkpebi ịkwụsị ọrụ).
Ihe ọ bụla na - eme, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọdachi adịghị eme, ọ ka mma ịnwe nhọrọ na nke a bụ ihe na - enye dị ka onyinye ZeroSSL.
Also ga-atụlerịrị otu ọ dị mfe ịgbanwe AC, nke nwere ike ịbụ nnukwu ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Ka anyị zoo ndị ọzọ site na ACME na-eto
Scratux: Etu ị ga - esi nweta nsụgharị ọhụrụ nke Scratch na GNU / Linux?